XOG CUSUB: Madaxweynaha Jubbaland oo Safiirka UK kala hadlay xiisadda ka taagan gobolka Gedo (Maxa cusub?) | HalQaran.com
Nairobi (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Khamiisti maanta safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaliya mudane Benfender ku qaabiley hoyga uu ka deganyahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in nooca doorashada 2020/2021 loo baahanyahay inay noqoto mid dastuurka waafaqsan Soomaaliduna kuwada qanacsantahay, taas si loo xaqiijiyana ay u baahantaahay in loo maro wadada ugu munaasibsan ee ay bulshada Soomaaliyeed kuwada qanacsanyihiin, hor u socodka dalka iyo nidaamka dowladnimana laga dhex arki karo.
Sidoo kale, Madaxweynaha iyo Safiirka ayaa kawada hadley dhaqdhaqaaqyada sharciga baalmarsan ee ay Dowlada federaalku ka wado gobolka Gedo, taas oo la isla qirey inay tahay faragelin qaawan oo aan sal iyo raad kulaheyn dastuurka dalka cawaaqib xumada ka dhalatana ay masuuliyadeeda qaadeyso DF Soomaaliya.
Safiirka dalka Ingiriiska ayaa ugu dambeyn, madaxweynaha Jubbaland uga mahadceliyey sida Madaxweynuhu muhiimada gaarka ah u siiyey adkeynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada ee deegaanada Dowlad goboleedka Jubbaland.
Axmed Madoobe oo safiirka UK kala hadlay xiisadda Gedo
Jubbaland iyo Dowladda